Articles by PL State
Puntland oo heshiis la gashay Mac-hadka Tababarka shaqaala Kenya
February 20, 2020 PL State 1
Waftigii ka socdey dawladda Puntland oo maalmahan hawlaha shaqo u joogey waddanka kenya ayaa maanta booqday mac-hadka tababarka shaqaalaha dawladda Kenya. Waftigaan oo isugu jirey Wasaaradaha Shaqada iyo shaqaalaha, Maaliyadda, Madaxtooyada, Hay’adda shaqaalaha rayidka iyo […]
Shaqaalaha dawladda Puntland oo Tababar ugu soo xirmay Garoowe
February 20, 2020 PL State 0
Wasaaradda shaqada, Shaqaha, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Puntland Ayaa tababar u soo xirtay qayb ka mid ah shaqaalaha dowladda. Tababarka ayaa waxaa loo qabtay waaxyaha maamulka iyo maaliyadda iyo shaqada iyo shaqaalaha ee hay’adaha iyo […]
February 19, 2020 PL State 0
Shirkan oo looga hadlayey Xeerarka hirgelinta Halgabka iyo Liltirka shaqaalahaha dawladda Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Shirka ayaa diiradda lagu saarayey sidii loo hirgelin lahaa sanduuqa Hawlgabka shaqaalaha (Pension Fund)oo […]
October 24, 2019 PL State 0
Wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhallinyarada iyo ciyaaraha Dowladda Puntland ayaa wareejisey wejigii koowaad ee kaararka aqoonsiga shaqaalaha dawladda Puntland oo gaaraya 2000 oo aqoonsi oo ay Wasaaraddu daabacday. Kaararkaan la daabacay ayaa waxay ay yihiin xogtii […]
Shir looga hadlayey Liltirka Mushaharka Shaqaalaha dawladda Puntland oo Garoowe lagu qabtay
October 3, 2019 PL State 0
Shir lagu soo bandhigayey warbixin laga soo saaray barnaamijka Liltirka mushaharka shaqaalaha dalwadda Puntland (Payroll Cleaning) oo soo qaban qaabisay Wasaaradda shaqaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa si qoto dheer loogu falanqeeyey nuxurkii warbixintaasi. […]
Hannaan lagu daah-furayey dib u habaynta Heerarka iyo Mushaarka shaqaalaha oo Garoowe lagu qabtay
September 18, 2019 PL State 0
Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha Dhallinyarada iyo Ciyaaraha dawladda Puntland oo kaashanaysa Mashruuca Tayaynta hay’adaha dawladda Puntland ee CIP ayaa maanta soo bandhigtay hannaan cusub oo lagu daahfurayey dib u habaynta iyo iswaafajinta heerar iyo mushaharka shaqaalaha […]
Shirkii Billaha ahaa ee Guddiga Fulinta ee Mashruuca CIP oo Garoowe ka furmay
September 11, 2019 PL State 0
Shirkii billaha ahaa ee guddiga fulinta Mashruuca CIP ee Tayaynta hay’adaha dawladda Puntland ayaa manta ka furmay xarunta Wasaaradda qorshaynta dalwadda Puntland iyadoona ay kasoo qayb galeen masuuliyiin ka tirsan hay’adaha dawladda eek a faaideysanaya […]
Qaybo kamid ah shaqaalaha dawladda Puntland oo Tababar u furmay
September 2, 2019 PL State 0
Wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland ayaa maanta tababar u furtay shaqaale ka kala tirsan hay’adaha kala duwan ee dawladda Puntland , tababarkaan ayaa ku saabsanaa habka loo maamulo shaqaalaha iyo sida loo […]
August 18, 2019 PL State 0
Shirkaan oo looga arrinsanayey barnaamijka dib u habaynta iyo dib u casriyeynta qaybo kamid ah hay’adaha dawladda Puntland ayaa maanta ka qabsoomay xarunta Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha, Dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland. Waxaana shirka kasoo qayb galay […]
August 6, 2019 PL State 0
Kulankaan oo lagu soo bandhigayey habraaca samaynta siyaasadaha dawladda Puntland ayaa waxaa lagu qabtay xarunta Wasaaradda Qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Puntland waxaan shir guddoominayey Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Qorshaynta. Kulanka ayaa waxaa looga […]